Fursadaha isbedelka dalka iyo doorka dhalinyarada | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay waxay hogaaminayaan isbedelka dhanka ganacsiga iyo Ciidanka Soomaaliya, waxayna hadda usoo jeesteen inay door muhiim ah ka ciyaaraan ka qeyb galka siyaasada iyagoo u tartamaya jagooyin doorashada soo socota.
Hal-abuuro wax badan kusoo kordhiyay ganacsiga ayaa soo ifbaxay 10-kii sano ee ugu dambeeyay, kuwaasoo doorkooda aad uga muuqdo magaalooyinka waaweyn ee dalka, oo Muqdisho ugu horeyso, oo lagu arkayo dhalinyarro fikrado cusub keenay, haba u badnaadeen kuwa ka yimid Qurbaha.
Isbedelka Soomaaliya wuxuu ku xiran yahay hadba inta la maalgeliyo dhalinyarada, oo la siiyo fursado ay uga qeybgali karaan siyaasadda iyo hogaaminta dalka, maadaama ay horumaro ka sameeyeen dhinacyada kale, oo la arkay awoodooda xagga aqoonta, maskaxda iyo hamiga ku jira.
Baarlamaanka hadda waqtigiisu dhamaadey ee 10-aad waxay dhalinyaradu ka ahaayeen tiro aad u badan, waxaana midka soo socda la rajeynayaa inay kuraas badan ku fariistaan, waayo tartanka iyo ololaha hadda ka socda dhalinyarada ayaa u badan.
Ka reebitaanka dhalinyarada ee siyaasadda waxay keenaysaa in Soomaaliya ay weydo fikradaha isbadalka iyo tamarta jiilka cusub ee bulshadda ka dhex muuqda, dhan walba.
Boqolkiiba 75% bulshadda Soomaaliya waa dhainyaro dad'doodu ka yartahay 25 jir, taasoo muujinaysa inuu dalka leeyahay mustaqbal wanaagsan, oo ifaya, maadaama odayaashii 30-kii sano ee lasoo dhaafay siyaasadda majaraha u hayay gabalkooda sii dhacayo.
Dhalinyarada waxay ahaayeen qoryaha dabka lagu shido intii burburka lagu jiray, iyadoo loo adeegsaday wax kastoo xun, laakiin maanta wacyigooda wuu isbedelay, oo waxay fahmeen jidka toosan, inkastoo ay jiraan kuwa wali dhabaha qaldan lagu sii wado.
Isbeddelka dhabta ah ee Soomaaliya wuxuu dhici karaa oo keliya marka dhallinyarada la maalgaliyo, lagu daro hogaanka, oo si macno leh loogu garab istaago inay dalkooda badbaadiyaan, maadaama dhalintu ahayd midii 1943 gobonimada u halgamay, kuwaasoo ahaa 13-kii dhalinyaro ee SYL oo sanad walba la xuso.
0 Comments Topics: dhalinyarada soomaaliya